Google AdWords vs. SEO: Maxay ka Fiican tahay?
Jawaabtu waxay aad ugu xiran tahay nooca ganacsigaaga. Ka hor inta aan la falanqeynin nooca suuq-geynta suuq-geyntu u fiican tahay qiimaha baabuurta iyo gaadiidka ganacsiga midkood - SEO ama Google AdWords, aynu marka hore qeexno shuruudahan soo socda. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad hesho faham fiican oo habka ugu habboon u shaqeyneyso suuq geyntaada.
Maxay tahay Farqiga u dhexeeya Google AdWords iyo SEO?
Nidaamka raadinta raadinta ayaa ah habka istiraatiijiyada iyo tabaha loo isticmaalo si loo kordhiyo tirada dadka soo booqda goobta. SEO wuxuu isticmaalaa farsamooyinka loola jeedo in lagu dhajiyo algorithm Google si uu khayraadka qofku u helo rikoor sare oo ku saabsan makiinada raadinta. Hababkaasi waxaa ka mid ah isticmaalka erayada muhiimka ah ee muhiimka ah, isku-xirka mowduucyada bogagga la isku hallayn karo ama goobaha kale ee la xiriira iyo sidoo kale isticmaalka sharraxaadda meta.
Google AdWords, marka loo eego, waxay isticmaalaan xayeesiin lacag leh. Sidan, milkiilayaasha bogagga waa inay bixiyaan mashiinka raadinta (iyadoon loo eegin inay tahay Google, Yahoo ama Bing) si ay u dejiyaan kheyraadkooda sare ee natiijooyinka raadinta Google. Waa in sidoo kale la ogaadaa in mulkiilaha goobta uu leeyahay inuu bixiyo mar kasta oo uu isticmaaluhu ku dhegeysto xayeysiiskiisa. Aan isbarbar dhigno Google AdWords iyo SEO
Waxaan ku bilaabi doonaa isbarbardhigga sicirka. Waxa ugu weyn ee ku saabsan SEO waa in ay noqon kartaa bilawga bilaash ah maadaama aan loo baahnayn in ay bixiso barnaamijyada ugu badan oo kaa caawinaya farsamooyinka SEO. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad ogaatid hababka SEO-ga ee ugu fiican u shaqeynaya khayraadkaaga oo aad u adeegsan kartid.
Si kastaba ha ahaatee, sida ugu dhakhsaha badan ganacsigaadu u korto, waxaa laga yaabaa inaad doorato adeegyo SEO ah, sida Semalt, si aad u sii kordhiso boggaga internetka si aad ugu noolaato ciyaarta oo aad garaacdo tartanka. Shirkadaha ku takhasusay aagga SEO oo leh fikrado ah in ay ka shaqaynayeen isla hal sano oo sanado ah waxay ku siin karaan ganacsiga dareenka iyo dadaalka uu u baahan yahay.
Google AdWords wuxuu leeyahay nidaam nooc ah oo riix ah. Nidaamkan, mid ayaa yeelan doona miisaaniyad gaar ah oo uu ku bixin doono mar kasta oo uu isticmaalaha ku qoro xayeysiiska. Sidaa awgeed, isticmaalaha badan ee aad heli karto, inta badan waa inaad bixisaa. Inkastoo laga yaabo inay u muuqato wax yar oo qaali ah marka hore, ma aha haddii aad is barbardhigto si aad u daabacdo iyo xayaysiisyada majaladda.
Tirada Viewers and Leads
Marka aad eegayso soo-celinta maalgashiga, waa inaad eegtaa tirada macquulka ah ee hogaamiyaasha Google AdWords iyo SEO. Labada hababba waxay bixin karaan tiro cajiib ah oo daawadayaasha ah. Faa'iidada AdWords, ee kiiskan, waa in ay heli karto raadad dheeraad ah mudo gaaban. Si kastaba ha noqotee, haddii aynu sii wadno wakhti dheer, waxaad arki doontaa in dadku ay badanaa u daaqi doonaan natiijooyinka baaritaanka dabiiciga ah. Faahfaahinta fudud ee xaqiiqadu waxay tahay in baaritaanka dabiiciga ah uu yahay kuwa isticmaalaya. Si aad u soo ururiso, AdWords wuxuu ku siin doonaa hogaamiyaasha ama daawadayaasha isla markiiba, laakiin maaha sidii ay u sii wadi laheyd sida SEO oo kaa qaadi kara daawadayaal ka badan xilliga la uruuriyay.
Xawaaraha, AdWords waxay noqon laheyd doorasho ka wanaagsan. Wixii SEO waxay qaadan doontaa waqti qaar ah dadka isticmaala si aad u aragto boggaaga iyada oo loo marayo natiijooyinka raadinta organic. Wixii AdWords inkastoo, waxaad ku heli kartaa hogaaminta markasta, sababtoo ah Google AdWords ayaa bartilmaameedsan kara tirada dadka aad dooratay. SEO ma bartilmaameed nimada. Maxaa SEO ah samayn karaa waa hubaal ka dhigeysaa in website-kaaga uu ku habboon yahay iyo dhagaystayaashaaga bartilmaameedsan ee aad doonayso inaad ka hesho.
Maxay tahay inaan doorto: Google AdWords ama SEO?
Hadda waxaad ogtahay faa'iidooyinka kaabayaasha suuq-geynta, waxay kuu fududeyneysaa inaad ogaatid midka u wanaagsan ganacsigaaga. Haddii aad ku dadaasho inaad si deg deg ah u dhaliso, markaa AdWords waxay noqon kartaa xulasho aad u fiican. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto in ganacsigaagu uu leeyahay koboc joogto ah, markaa waa inaad ku maal gashaa adeegsiga farsamooyinka SEO. Ogsoonow, in labada waddo suuq geynaya ay cadeeyn karaan inay faa'iido u yihiin inta aad dejinayso tusaalayaasha waxtarka muhiimka ah oo sii wadaan si loo qiyaaso guusha hawada suuq-geynta Source .